क्रिसमसमा दिने उत्तम स्मार्टवाचहरू ग्याजेट समाचार
क्रिसमसमा दिने उत्तम स्मार्टवाचहरू
इग्नासियो साला | | ग्याजेटहरू, Smartwatch
क्रिसमस केवल कुनाको वरपर छ। यदि हामी विगतको ब्ल्याक फ्राइडेका बिभिन्न प्रस्तावहरूको फाइदा लिदैनौं र हामी आफ्नो पार्टनर, आमा, बुबा, बच्चाहरू वा साथीहरूको लागि के खरीद गर्न सक्दछौं भन्ने स्पष्ट नभई अगाडि बढ्ने छैनौं, वास्तविक अलिडाड ग्याडेटमा हामी फरक बनाइरहेका छौं। क्रिसमसमा दिन आइटम वस्तुहरूको सूची।
Si buscas स्मार्ट बत्तीहरू, क्वान्टिफाई bra ब्रेसलेटहरू, स्मार्ट वक्ताहरू o हेडफोन्स दिन हामी तपाईंलाई पहिले प्रकाशित गरेका गाईडहरूसँग परामर्श लिन सक्दछौं। अब यो पालो को पालो हो smartwatches, एक उपकरण जुन हालका वर्षहरूमा धेरै बजार प्राप्त गर्दै छ क्वान्टिफाइ। कंगनको साथ।
1 स्मार्टवाच वा क्वान्टिफाइंग ब्रेसलेट?
2 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ
3 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ एक्सएनयूएमएक्स
4 सैमसंग ग्यालेक्सी घडी
5 Huawei वाच GT 2
6 जीवाश्म खेल स्मार्टवाच
7 एप्पल वाच श्रृंखला //3/4
स्मार्टवाच वा क्वान्टिफाइंग ब्रेसलेट?
स्मार्टवाचमा निर्णय गर्नु अघि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ स्मार्टवाच र क्वान्टिफाइंग ब्रेसलेट बीच के भिन्नताहरू छन्?। लगभग, मुख्य भिन्नता, मूल्यको साथसाथै उनीहरूले हामीलाई प्रदान गर्ने कार्यक्षमतामा पाइन्छन्।
जबकि स्मार्टवाचले हामीलाई ठूलो स्क्रिन आकार र सम्भावना प्रदान गर्दछ दुबै कल र सन्देशहरूको उत्तर दिनुहोस्, क्वांटिफाइंग ब्रेसलेटले हाम्रो शारीरिक गतिविधि मापन गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, यस्तो प्रकार्य जुन हामीले स्मार्टवाचमा पनि फेला पार्न सक्छौं।
स्मार्टवाच र क्वान्टिफाइंग ब्रेसलेट बीचको अर्को भिन्नता ब्याट्री जीवन। जबकि स्मार्टवाचेसको एक वा दुई दिनको अधिकतम ब्याट्री जीवन हुन्छ, यथोचित रिस्टब्यान्ड दुई हप्ता सम्म रहन सक्छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ
El सैमसंग ग्यालेक्सी घडी सक्रिय यो धेरै संख्यामा व्यक्तिको पहुँचको लागि सिर्जना गरिएको स्मार्टवाचहरूको नयाँ दायराको पहिलो पुस्ता हो। यो पहिलो पुस्ता हामीलाई एक प्रदान गर्दछ १.१ इन्च स्क्रीन 1,1 360० × resolution×० रिजोलुसन र २ a० एमएएच ब्याट्रीको साथ। यसमा पानी र धुलो बिरूद्ध IP68 सुरक्षा छ र ATM ATM सम्म प्रतिरोध।
कार्यक्षमता को मामला मा, यदि हामी संग यो एक सामसु smartphone स्मार्टफोन संग जोडी छ, हामी यसलाई बाट अधिक प्राप्त गर्न को लागी सक्षम हुनेछ, तर यो आवाश्यक हुन्छ जब यो आउँछ हामीलाई प्रदान सबै सुविधाहरूको मजा लिन सक्षम हुनु। हाम्रो शारीरिक गतिविधि मापन गर्नुहोस्, हाम्रो मुटुको दर मापन गर्नुहोस् र हाम्रो निद्रा चक्र निरीक्षण गर्नुहोस्।
मूल्य सैमसंग ग्यालेक्सी घडी सक्रिय बाट छ 199 यूरो।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ एक्सएनयूएमएक्स
सामसु'sको वाच सक्रिय दायराको दोस्रो पुस्ताले हामीलाई व्यावहारिक रूपमा प्रस्ताव गर्दछ पहिलो जेनेरेसनमा समान सुविधाहरू तर यसले दुई नयाँ र चाखलाग्दो प्रकार्यहरू थप गर्दछ जस्तै फल डिटेक्टर र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
धन्यवाद गिर डिटेक्टर, उपकरणको एक्सेरोमीटरले स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउँदछ कि यदि हामी अचानक अचानक खसेका छौं र आपतकालिनलाई सूचित गर्न आमन्त्रित गर्दछ। यदि हामीले त्यस अनुरोधलाई जवाफ दिएनौं भने, यसले स्वचालित रूपमा कल गर्दछ हाम्रो स्थानमा कुराकानी गर्ने।
समारोह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हामीलाई हाम्रो हृदयमा असामान्यताहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ जुन पहिले पत्ता लगाइएको थिएन। यो सुविधा समावेश गर्न पहिलो स्मार्टवाच एप्पल वाच, यस कार्यक्षमता को लागी धन्यवाद जीवनको एक ठूलो संख्या बचाएको छ।
सामसु Watch वाच एक्टिभ २ मा १.2 इन्च (mm 1,4 मिमी) / १.२ इन्च (mm० मिलिमिटर) स्क्रिन छ, यो Tizen (सैमसंगको अपरेटिंग सिस्टम) र Exynos 44 १०० प्रोसेसर द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ। यसले हामीलाई GB GB भण्डारण, ब्लुटुथ .1,2.० प्रदान गर्दछ। र यो LTE संस्करणमा पनि उपलब्ध छ।
मूल्य सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ २ mm mmmm एमएम यो २ 295eयुरो हो। यदि हामी धेरै पैसा खर्च गर्न चाहँदैनौं भने हामी पहिलो पुस्ता प्राप्त गर्न सक्छौं, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी वाच एक्टिभ जसको मूल्य १ 195। यूरो छ.
सैमसंग ग्यालेक्सी घडी
सक्रिय मोडेलको अतिरिक्त, सामसु्गले हामीलाई पनि प्रदान गर्दछ सैमसंग ग्यालेक्सी घडी, एक प्रीमियम दायरा मोडेल। यो मोडल गियर दायराको प्राकृतिक उत्तराधिकारी हो जसले बजारमा केही वर्ष पहिले हिट गर्‍यो र बजारमा यती सफल भएको छ। यो दुई आकारमा उपलब्ध छ: and२ र mm 42 मिमी र यो प्रीमियम सामग्री संग बनेको छ।
सामसुले स्मार्टवच बजारमा हालै उपलब्ध गराउने सबै मोडेलहरू जस्तै यो Tizen द्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ। Mm 46 एमएम मोडलको १.1,3 इन्चको स्क्रीन छ जबकि mm२ एमएम मोडेलको १.२ इन्चको स्क्रीन छ। दुबै स्क्रिनहरू तिनीहरूसँग × 360० × of×० को रिजोलुसन छ।
Mm 46 एमएम मोडेलको ब्याट्री 472 270२ एमएएच, 42२ एमएम मोडलको लागि २XNUMX० एमएएच छ। यो मोडेल भनेको केहि मध्ये एक हो एनएफसी चिप हाम्रो नाडी मार्फत भुक्तानी गर्न सक्षम हुन। यो एक जीपीएस चिप छ हाम्रो शारीरिक गतिविधि बाहिर निगरानी गर्न।
मूल्य सैमसंग ग्यालेक्सी घडी बाट छ 269 यूरो, 46 मिमी संस्करण को लागी।
Huawei वाच GT 2
यदि तपाईं ठुलो स्मार्टवाच खोज्दै हुनुहुन्छ भने Huawei वाच GT2तपाईले खोजिरहनु भएको जस्तो एक हुनु पर्छ। Huawei वाच GT2छ एशियाई फर्म द्वारा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडेल र यो वाच जी.टी.को दोस्रो पिढी हो, पहिलो पिढी जसले १० करोड भन्दा बढी युनिटहरू बिक्री गर्‍यो।
यस मोडेलको एक छ १.1,39। इन्च AMOLED स्क्रीन, लाईटओएस (हुवावेको आफ्नै अपरेटिंग प्रणाली) र किरीन ए १ प्रोसेसर (हुवावे द्वारा डिजाइन र निर्माण पनि) द्वारा व्यवस्थित गरिएको हो। योसँग 1०० गीतहरू र एक स्वायत्तताको लागि भण्डारण छ जुन २ हप्तासम्म पुग्न सक्दछ (यसको सबै कार्यहरू अधिकतममा कम गर्दै)।
यो आईओएसको साथ कुनै पनि स्मार्टफोनसँग उपयुक्त छ (आईओएस or वा पछि आवश्यक) र एन्ड्रोइड (एन्ड्रोइड requires.9 वा पछि चाहिन्छ) मार्फत Huawei स्वास्थ्य अनुप्रयोग। यो models२ र mill 42 मिलिमिटरको दुई मोडलमा उपलब्ध छ, त्यसैले यो कुनै पनि नाडी आकारमा अनुकूल गर्दछ।
कार्यक्षमता को मामला मा, जो वास्तवमा हामीलाई चासो राख्ने कुरा हो, केवल हामी मात्र गर्दैनौं हाम्रो मुटुको दर रेकर्ड गर्नुहोस् र हाम्रो निद्रा निगरानी गर्नुहोस्, तर हामी स्वचालित रूपमा प्रदर्शन गर्छौं व्यायाम को कुनै पनि प्रकार मा, बाहिर र जिम दुबै।
El Huawei वाच GT2अमेजनमा को लागी उपलब्ध छ 239 यूरो।
जीवाश्म खेल स्मार्टवाच
वाच निर्माता फोसिल स्मार्टवाच क्षेत्रको सब भन्दा पुरानो हो र यसको उत्कृष्ट प्रमाण हो जीवाश्म खेल स्मार्टवाच। यस मोडेलले यस फर्मको क्लासिक मोडेलहरू भन्दा फरक छ, हामीलाई एक स्पोर्टी डिजाइन प्रदान गर्दछ, यो दुई आकारमा उपलब्ध छ And१ र mm 41 मिमी र तीन रंगहरूमा: निलो, कालो र गुलाबी (mm१ मिलिमिटर संस्करणमा मात्र उपलब्ध)।
जीवाश्म खेल भित्र हामी एन्ड्रोइड वेयर पाउँछौं, यो स्न्यापड्रैगन पोशाक 3100१०० द्वारा प्रबन्धित गरिएको छ, यसमा एनएफसी चिप छ गुगल पे संग हाम्रो नाडी मार्फत भुक्तान गर्न र हाम्रो निद्रा र हाम्रो खेल गतिविधि र दिल दर दुबै अनुगमन गर्न सेन्सर छ।
यस मोडेलको पट्टि २२ मिलिमिटर छ, त्यसैले हामीसँग यसलाई अनुकूलन गर्न धेरै संख्याका विकल्पहरू छन्। को मूल्य जीवाश्म खेल बाट छ अमेजनमा १149eयूरो।
एप्पल वाच श्रृंखला //3/4
यदि तपाईंसँग आईफोन छ भने, उत्तम स्मार्टवाच जुन तपाईंसँग रहेको छ र यसले तपाईंलाई दुबै आईओएसको पूरा फाइदा लिन अनुमति दिन्छ ऐप्पल वाच। एप्पल वाचको साथ तपाईं केवल सन्देशहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्न, तर पनि तपाईं कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
एप्पल वाच श्रृंखला the सस्तो मोडेल हो जुन हामीसँग छ। श्रृंखला3र with सँगको फरक पाइएको छ स्क्रीन आकार, जुन to 38 देखि 40० र to२ देखि mm 42 मिमी देखि जान्छ। दुबै मोडेलमा पट्टिहरू उपयुक्त छन्।
सबै एप्पल वाच मोडेलहरू एलटीई संस्करणमा उपलब्ध छन्। मुख्य भिन्नता हामी श्रृंखला4र श्रृंखला between बीचमा पाउँछौं पछिल्लोको सँधै अन-डिस्प्ले। दुबैमा फल डिटेक्टर र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समारोह मुटुमा असामान्यताहरू पत्ता लगाउन शामिल छन्।
El Apple Watch Series5यसको mm 44 एमएम संस्करणको लागि उपलब्ध छ अमेजनमा 479 XNUMXeयूरो। को Apple Watch Series3को लागी उपलब्ध छ 229 यूरो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » ग्याजेटहरू » Smartwatch » क्रिसमसमा दिने उत्तम स्मार्टवाचहरू
एप्पलमा तिनीहरू तपाईको आइपड क्लासिकको प्रतिलिपिहरूको साथ जोकको लागि होइनन्
मेरो कम्प्युटर ढिलो छ। म यसलाई कसरी मिलाउने?